नेपाल आज | भीम रावललाई सांसद् आलेको कडा जवाफ, ‘पद नपाएपछि रावल छटपटाए’ (भिडियोसहित)
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा गुटगत विवाद झन मौलाउँदै गएको छ । शीर्ष नेताहरुले खडा गरेको गुटको अशर स्थानीय तहसम्म पुगेको छ ।
गुटगत विवादका कारण नै पार्टी र सरकार संचालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षी दल भन्दा आफनै पार्टी भित्रबाट बढी बिरोध आउन थालेपछि सरकार र पार्टी दुवै बदनाम हुन थालेका छन् । भएका राम्रा कामहरुको पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न छोडेको छ ।
पछिल्लो समय पार्टी गतिविधि र सरकार संचालन प्रक्रियामा चर्को असहमति राख्ने नेता हुन स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल । रावलले युनिभर्सल पिस फेडरेसनको कार्यक्रम, सीके राउतसंगको सम्झौता लगायतका बिषयमा खुलेरै सरकार र प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहेका छन् ।
रावलले राष्ट्रहीतका पक्षमा आफूले आवाज बुलन्द पारेको बताएपनि यसलाई नेकपा भित्र गुटगत विवाद र पदको बार्गेनिङकारुपमा ब्याख्या गर्न थालिएको छ । नेता रावलले आफनो धारणाले कसैको टाउको दुखे देशभक्तिको चक्की खान भन्दै जवाफ फर्काएपनि उनको भनाइलाई केन्द्रीय सचिवालय सदस्य र मन्त्री पदका लागि गरिएको बार्गेनिङका रुपमा अथ्र्याउन थालिएको छ ।
रावललाई आलेको चुनौती
प्रधानमन्त्री एवम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट केन्द्रीय सदस्य एवम सांसद प्रेम आलेले रावलले सरकारका कामहरुको बिरोध गरेर पदको बार्गेनिङ गरेको दाबी गरे ।
उनी भन्छन्, ‘देश बिखण्डनको अभियान चलाएको सीके राउतलाई राजनीतिको मुल धारमा ल्याउने काम कसरी नराम्रो हुन सक्छ ? सहमति भए लगत्तै बिरोध गर्नुपर्ने कारण के हो ? दुई दिन पर्खिन सक्ने पनि धैर्यता छैन ? ’
आले भन्छन्, ‘ आज नेकपा भन्ने पार्टी बहुमत छ, यो सबै ओलीको देन हो । आफू जस्ता थुप्रै नेताहरुले सांसदको लोगो लगाउन पाएको ओलीकै कारण हो । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा ओलीले के गरे दुनियालाई थाहा छ । आज ओलीको बिरोध गरेर आफू राष्ट्रवादी हुन खोज्ने ?’
प्रधानमन्त्रीलाई सुदूरपश्चिम निषेध गर्न खोजियो
सांसद् आलेले रावलसहितका केही नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही कार्यक्रममा सहभागी हुनबाट रोक्न षडयन्त्र गरेको आरोप लगाए । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन डोटीको बीपी नगरमा सहजपुर–बीपीनगर हुँदै बागछेडासम्मको सडकको शिलन्यास गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई सहभागी हुनबाट रोक्न खोजिएको उनको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको शिलन्यास कार्यक्रममा नेता रावलसंगै लेखराज भट्टपनि अनुपस्थित थिए । यसअघि २०४३ सालमा जिल्ला पञ्चायतको सदस्य हुँदा भरतबहादुर खड्काले सो सडकको शिलन्यास गरेकाले दोहर्याएर शिलन्यास गर्न नहुने रावल पक्षको तर्क छ । नेता आलेका अनुसार त्यो ‘शिलन्यास’ नभएर हास्यास्पद ‘शिला नाश’ को कार्यक्रम थियो ।
ओली विकासवादी नेता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानमा दृढ रहेको र सोही अनुसार सरकारका कामपनि अघि बढिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा डोटीमा मात्रै ३५० करोड बजेट बिनियोजन भएको र त्यस मध्ये अहिले २०० करोडको काम भैरहेको छ ।
सुरुमा डोटी जिल्लाका लागि २०० करोड मात्र बजेट भएपनि पछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सडक कालोपत्रे गर्न १५० करोड थपिएको आले बताउँछन् । यो सबै काम सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत भैरहेको छ ।
वाइडबडीका दोषी चिनिन्छन्
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका आलेले वाइडबडी बिमान भ्रष्टाचार प्रकरण टुंगोमा पुग्ने बिश्वास व्यक्त गरे । आफूसहितको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेकाले यसमा संलग्न सबै कुराको पर्दाफास हुने उनले बताए ।
नेता रावलले विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न भ्रष्टाचारलाई समाप्त पारी सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखे ।